Dacha | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no hananganana sehatra iray
Ny tompon'ny zaridaina rehetra dia maniry ny hampifaly ny maso amin'ny fomba voafaritra tsara sy ny tsipika mazava, ary ny faritra manontolo dia mifanaraka tanteraka amin'ny hevitra ankapoben'ny tompony, ny drafitra sahaza azy dia ho tonga amin'ny famonjena. Ahoana ny fomba hanatonana ny olana momba ny drafitra? Ny fiezahana hisaintsaina ny fametrahana ny tapa-javamaniry ahazoana sehatra enina na mihoatra, hamaly ireto fanontaniana manaraka ireto: Inona no fanamaivanana ny faritra?
Ahoana no hanaovana trano ho an'ny fanomezana
Ny trano fonenana dia tsy isalasalana fa ny toerana fialan-tsasatra indrindra indrindra ho an'ny fianakaviana manontolo. Tena tonga lafatra amin'ny fihaonam-be amin'ny hariva miaraka amin'ny kebabs na mofomamy. Ao anaty lava-pirahalam-bahiny mahavariana dia misy orinasa goavambe afaka miorina tsara. Arbor amin'ny tananao, misafidy ny fitaovana hanamboarana Noho izany, fanapahan-kevitra izany!
Ny tavy solosaina hanome, izay tsara kokoa ny misafidy
Ny mony sy ny trimmers dia mora sy mora ary mahavita zavatra, mety tsara amin'ny asa any amin'ny trano iray. Miatrika ny ahitra izy ireo any amin'ny faritra misy sehatra samihafa. Ny tombontsoa manokana dia ny fampiasana azy ireo any amin'ny toerana mitoka-monina sy mavesatra loatra. Ankoatra izany, mora sy mora kokoa ny mihazona azy ireo noho ny mpanefy.
Amin'ny fomba ahoana ary amin'ny zavatra atao amin'ny pergola ao amin'ny firenena amin'ny tanany manokana
Ny fanadiovana ny efitrano fonenana dia manana foana ny iray amin'ireo toerana lehibe ao an-tsain'ny tompony. Rehefa vita ny trano, ary ny zaridaina sy ny zaridaina dia namboly, te-hanana toerana iray ahafahanao miala sasatra. Tonga eto ny fanampiana ilay rafitra, izay azo tanterahina ao anatin'ny fotoana fohy ary manao izany. Eritrereto ny fomba hananganana pergola amin'ny tananao, vakio ny dingana amin'ny antsipiriany sy ny sarin'ireo sary tsara indrindra.
Vovonan'ny polycarbonate - ny tombontsoa sy ny tsy fahampian'ny fomba fanaovana izany
Amin'ny fotoam-pivoriana dia matetika ianao no te hipetraka amin'ny rivotra madio, hijery amin'ny boky na hankasitraka ny natiora mba tsy hanelingelina ny masoandro. Tsy mbola mijanona ny teknôlôjia, ary amin'izao fotoana izao, maro no manangana trano fivoahin'ny trano fahavaratra vita amin'ny polycarbonate - fitaovana iray izay nahita fampiharana amin'ny sehatra maro. Ankehitriny dia hianatra ny fomba hananganana gazebo feno polycarbonate amin'ny tanantsika manokana isika, hanombana ny fiheverana sy ny fiheverana, ary hanoratra ny dingana fanorenana amin'ny antsipiriany.
Ahoana no fomba hananganana lakazy ao amin'ny firenena?
Matetika ny mponina any an-tsaha dia manana ny lakany ao amin'ny tranokala. Ary ireo izay tsy manana izany, angamba, dia tsy nieritreritra ny hanangana efitrano toy izany. Ny fitehirizana ny fitehirizana ao amin'ny lakaly dia efa zatra ny olona. Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny aminareo izahay hoe ahoana no fomba ahafahanao manao tranokala amin'ny tananao manokana tsy misy mpanampy.
Brazier natao tamin'ny vato tamin'ny tanany
Raha mahandro sakafo kebabs eny an-tokontany ianao, dia tokony hividy kakazo na hanatsarana ny vato ianao amin'ny voalohany. Ny gilasy azo avy amin'ny giro dia mijery trite, ary raha tsy misy na inona na inona hamerenana aorian'ny faran'ny sakafo, dia hiorina haingana ny rafitra vy ary tsy azo ampiasaina intsony. Indrindra indrindra fa mila mandoa vola be ianao amin'ny vidiny.
Ahoana no fomba anaovana zaridaina tsara tarehy amin'ny tananao?
Ny fialana any amin'ny firenena miaraka amin'ny ankizy dia mety ho mahafinaritra kokoa amin'ny fanomezana ny tranokala misy singa sy rafitra mahaliana. Eo afovoan-tany, ary kianja filalaovana na trano iray manontolo. Anatin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny famolavolana sy ny fihaonam-be amin'ny kitapo hazo ianao amin'ny fanomezana ny tananao, ny sary sy ny sarin'ireo safidy fananganana samihafa.
DIY asa tanana ho an'ny zaridaina: ahoana no anaovana karaoty (miaraka amin'ny sary)
Androany, miezaka ny manantena ny mpamboly fa tsy ny fananganana zavamaniry tany am-boalohany sy tsy fahita firy, fa koa ny fananganana ny efitranony. Ny mariazy, vita tanana, dia karazana zavakanto tsy mahazatra ary manangona kompile zaridaina. Avy amin'ny vato Ho an'ny famokarana kiraro dia mila: fonosana mainty hoditra; pensilihazo; biriky maromaro; akoranjely sy varahina; ny lakaoly sasany amin'ny lakaoly
Ahoana no hanaovana trano fantsom-bary, trano fandroana ary garazy
Ny teknôlôjia amin'ny fanamboarana tafo mandrakotra ny rindrina ivelany roa dia iray amin'ireo malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Izany dia ahafahana miaro ny rafitra ho ambony indrindra amin'ny karazan-drongony rehetra, ary koa mba hamoronana efitrano fatoriana lehibe. Na izany aza, na dia tsotra aza ny fanamboarana tafo toy izany, dia ho sarotra ho an'ny mpanao trano maro ny manamboatra ny tranon'io trano io.
Ny menaka fanamafisam-pahasalamana mandoro lava ny fanomezana
Moa ve fandroana lava mangatsiatsiaka tsy misy fepetra afaka ataon'ireo indostrialy indostrialy na amin'ny tananao manokana (amin'ny anao manokana) miaraka amin'ny gazy matetika sy mahaleo tena? panafody. Famaritana ny teny hoe "mirehitra lava" ao anaty lafaoro mahazatra, ny solika dia mandoro ao anatin'ny ora vitsivitsy, manalefotra haingana ny efitrano, fa maika haingana ihany koa.
Ahoana ny fananganana tafon-trano ao an-trano
Toeram-ponenana - efitrano malalaka, izay mivantana eo ambanin'ny tafo, izany hoe, raha ny marina, dia trano fonenana. Ampiasain'izy ireo ankehitriny ny fanorenana trano sy trano fonenana. Na dia izany aza, rehefa mampiasa ny toeram-ponenana ho efitra efitrano velona, ​​dia tokony ho raisina ao an-tsaina fa ilaina ny fisidinam-panamboarana avo lenta, satria mety ho mafana sy mando loatra amin'ny ririnina izany ary mafana amin'ny fahavaratra.
Ahoana ny fomba ahafahana manamboatra ny voninkazo manokana amin'ny tavoahangy plastika
Isan'andro dia mamokatra vokatra plastika goavana ny olombelona, ​​fa tsy mieritreritra ny tontolo iainana, fa ny fako toy izany dia azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny mpandraharaha maro dia afaka manamboatra voninkazo avy amin'ny tavoahangy plastika tsy misy entana ho an'ny trano anatiny sy ny zaridaina. Ahoana ny fomba hanaovana izany sy izay ilaina, mandinika manaraka.
Inona no tsara kokoa hisafidianana: lavadrano na lavadrano iray omenao?
Na ho ela na ho haingana, ny tompon'ireo dachas, izay tsy ampy ny ampy amin'ny fananana rano afovoan-drano, dia mieritreritra ny fanontaniana amin'ny fitadiavana loharano iray. Amin'ity tranga ity, ny hany safidy dia ny ambaratonga ambanin'ny tany. Mba hanapahan-kevitra ny amin'ny fomba fanalan'ny rano hisafidy - lavadrano na lavadrano iray dia tokony hahafantatra ny tombontsoa sy ny tsy fahampian 'ny tsirairay amin'izy ireo.
Ahoana no ahitanao rano amin'ny toeram-ponenana tsara: ny kalitaon'ny rano, ny fitaovana
Raha tsy misy rano any amin'ny faritra ambanivohitra, dia matetika ny tompon-trano no manamboatra lavadrano na mandavaka lavadavaka. Zava-dehibe ny fahatsaran'ny kalitaon'ny rano. Izany no mahatonga, na alohan'ny hanombohana asa aza, dia mendrika ny hianatra amin'ny antsipirihany kokoa ny olana momba ny fisian'ny rano, ny karazany sy ny fomba fikarohana, ary koa ny fomba famaritana ny kalitaon'ny rano fisotro - dia handinika izany rehetra izany isika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Dacha